တရုတ်နိုင်ငံက Tianzhou-2 ကုန်တင်အာကာသယာဉ် လွှတ်တင်ရန် ပြင်ဆင် - Xinhua News Agency
ဝန်ချန်း ၊ ဟိုင်နန် ၊ မေ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ကျွန်း ဝန်ချန်း အာကာသယာဉ်လွှတ်တင်ရေးစခန်းရှိ ဒုံးလွှတ်စင်သို့ မေ ၁၆ ရက်တွင် ပေါင်းစည်းထားသော Tianzhou-2 ကုန်တင်အာကာသယာဉ် နှင့် Long March-7 Y3 သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံတို့ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ လူလိုက်ပါနိုင်သော အာကာသအစီအစဉ် အေဂျင်စီ (CMSA)ထံမှ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ကျွန်း ဝန်ချန်း ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာရှိ ဒုံးလွှတ်စင်တွင် ပေါင်းစည်းထားသော Tianzhou-2 ကုန်တင်အာကာသယာဉ် နှင့် Long March-7 Y3 သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံတို့အား မေ ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လွှတ်တင်ရေးစခန်းရှိ ဒုံးပျံအစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ကောင်းမွန်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိကြောင်း ၊ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း လွှတ်တင်ခြင်းမပြုမီ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းစဉ်အား စစ်ဆေးမှုများ နှင့် ပူးတွဲစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း CMSA ထံမှ သိရသည်။ (Xinhua)
#China #spacecraft #Tianzhou-2 #တရုတ်နိုင်ငံ #အာကာသယာဉ် #ဝန်ချန်း #ဆင်ဟွာ #xinhua #Myanmar #xinhuamyanmar
WENCHANG, Hainan, May 16 (Xinhua) — The combination of the Tianzhou-2 cargo spacecraft and the Long March-7 Y3 carrier rocket has been transported to the launching area of the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China’s Hainan Province on Sunday, according to the China Manned Space Agency (CMSA).
The facilities and equipment at the launch site are in good condition, while various pre-launch function checks and joint tests will be carried out as planned, the CMSA said. Enditem